थाहा खबर: ७ पास गरेर २ कक्षामा पढ्दैछिन् लक्ष्मी श्रेष्ठ ! जान्‍नुहोस् किन?
७ पास गरेर २ कक्षामा पढ्दैछिन् लक्ष्मी श्रेष्ठ ! जान्‍नुहोस् किन?
चरिकोट : सुन्दा अचम्म लाग्‍नसक्छ, तर सत्य हो। दोलखाको एक विद्यालयमा ८ कक्षा पढ्नुपर्ने विद्यार्थी २ कक्षामा अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ।
दोलखा लाकुरीडाँडा गाविस–४ ठेगाना भएकी २४ वर्षीया लक्ष्मी श्रेष्ठ हाल कक्षा २ मा अध्ययन गरिरहेकी छन् । दोलखाको एक मात्र बहिरा पढ्ने विद्यालय भीमेश्वर बहिरा प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा २ सम्मको मात्र पढाइ हुने गरेको छ। बहिरालाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन गरेको यो विद्यालयमा ३५ जना विद्यार्थी छन्। यहाँ १६ देखि २४ वर्षसम्म उमेर भएका विद्यार्थी पढ्न आउँछन्। २ कक्षा पास गरिसकेका विद्यार्थीका लागि ३ कक्षा पढ्ने व्यवस्था यस विद्यालयमा छैन्। नजिकै अर्को विद्यालय पनि छैन्।
भूकम्प जानुभन्दा पहिले लक्ष्मी श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेमा रहेको सिन्धु बहिरा निमाविमा कक्षा ७ मा पढ्थिन्। भूकम्पको त्रासले सिन्धु बहिरा विद्यालयसँगको सम्बन्ध छुटायो उनलाई । त्यही भूकम्पले गर्दा उनी आफ्नो घर लाकुरीडाँडा आइन्। लाकुरीडाँडामा आमाबुबासँग बसे पनि उनलाई विद्यालय पढ्नु पर्छ भन्ने कुराले पिरोलिरहेको र आमाबुबाले आफ्नो साङ्केतिक भाषा नबुझेकै कारण आफू घर छोडेर २ कक्षामा पढ्न आएको लक्ष्मी बताउँछिन्।
आफ्नो बाआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पनि आफ्नै जिल्लाको स्कुलमा पढ्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। “मलाई रहर छैन २ कक्षामा पढ्न, फेरि जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन। आमाबुबासँग बसेर समय काट्नुभन्दा बहिरासँगै केही सिकौँ भनेर म कक्षा २ मा अध्ययन गरिरहेको छु।” उनले भनिन्,'मलाई धेरै दुःख पनि लाग्छ, लाज पनि लाग्छ, किनकी मैले ८ कक्षामा पढ्दा धेरै जानेको थिएँ, अहिले २ मा पढेको कुरा मैले फेरि पढिरहेको छु।”
यो विद्यालय आर्थिक हिसाबले पनि ज्यादै कमजोर छ। प्रधानाध्यापक बहिरा नै छिन्। यसले विद्यार्थीलाई सहयोग त पुर्‍याएको छ तर शिक्षा कार्यालयले बाल शिक्षाको कोटामा पठाएको शिक्षिका बहिरा वा साङ्केतिक भाषा जानेको नहुँदा ज्यादै अप्ठेरो परेको प्रअ कार्कीको भनाइ छ। उनी थप्छिन्, “नसुन्ने र सुन्ने विद्यार्थी अर्थात् साङ्केतिक पढ्ने अन्य विद्यार्थी भइदिए नसुन्नेलाई ऊर्जा पैदा हुने थियो र यो व्यवस्थाका लागि मैले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिरहेको छु, कसैले सुनेन।”
बहिरालाई दया गर्ने मात्र हैन अवसर दिनु पनि आवश्यक रहेको प्रअ कार्कीको भनाइ छ।